IVictoria yabantu abayi-4. - I-Airbnb
IVictoria yabantu abayi-4.
"I-Havenzicht", iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi ayi-3 125 m2 kumgangatho we-6. Iifenitshala zale mihla: iholo yokungena ene-WC eyahlukileyo. Igumbi lokuhlala/lokutyela elinetafile yokutyela, i-TV, i-TV yedijithali, amajelo e-TV asemhlabeni wonke kunye nenkqubo ye-hi-fi. Phuma uye kwi-terrace. Igumbi eli-1 elinebhedi eyi-1 x 2 (iisentimitha eziyi-90, ubude be-200 cm). Igumbi lokulala eliyi-1 eline ...
... Ibhedi elala abantu ababini enye (iisentimitha eziyi-180, ubude be-200 cm), i-TV. Vula ikhitshi (umatshini wokuhlamba izitya, iithempleyithi ezine zeglasi ye-ceramic hob, umatshini wokwenza ikofu yombane, ii-Capsules zomatshini wokwenza ikofu (i-microwave) engabhatalelwayo, edibeneyo ye-microwave). Ishawa, i-double hand-basin. I-terrace enkulu 60 m2. Ifenitshala yetreyini, indawo yokuhlala, igumbi lebhokisi. Ukubuka ulwandle, izibuko kunye nesixeko. Izixhobo: umatshini wokuhlamba iinwele, umatshini wokomisa iinwele. I-intanethi (i-wifi, yasimahla). Indawo yegaraji n 10 eyadini. Nceda uqaphele: indlu engatshayiyo. Ialam yomsi, isicimi-mlilo. Iprojekthi yophuhliso olupheleleyo. Yiba ngomnye weendwendwe zokuqala ukonwabela le ndawo ikhethekileyo ngexabiso eliphantsi!
2021-22 - 2025 02-01: Umsebenzi wokwakha owenziwa kufutshane nendlu (30 m)
I-Oosteroever: Iflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla "eVictoria", eyakhiwe ngo-2016. Iikhilomitha eziyi-300 ukusuka elunxwemeni. Endlini: ilifti, igumbi lokugcina iibhayisekile. Ipaki yemoto kawonke-wonke. Isuphamakethe 800 m, iziko lokuthenga 4 km, ivenkile yokutyela 1 km, 20 imizuzu yokuhamba ukuya embindini, i-tram 600 m, i-ferry "5 imiz ukuya e-Oostende", i-nudist beach 5 km. I-Marina 1 km, isikolo sokusefa iikhilomitha eziyi-2. Iindawo ezikufutshane ezinomtsalane: I-Fort Napoleon 500 m, Ixesha le-Hang 500 m, Uhambo lolwandle/ukuhamba ngephenyane e-Franlis 1 km.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oostende